Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 45
Sida ay ku waramayaan wararka Warbaahinta Al-Furqaan ay heleyso, waxaa xeebaha dalka Yaman lagu daadiyay Tahriibiyaal u dhashey dalalka Soomaaliya iyo Kenya, kuwaas oo kusii socoday dalka Yaman si ay uga sii gudbaan wadamada Khaliijka. Dooni ay saarnaayen ugu yaraan 50 Ruux ayaa lagu soo waramayaa in dadkii saarnaa si qasab ah loogu daadiyay badda, kadib markii Naaqudaha Doonta uu ...	Read More »
Kenya oo Dhabbaha Saartay Rabshadihii dhacay sanadkii 2007 Oo Kale.
Boqollaal katirsan Taageeriyaasha Raila Odinga ayaa isugu soo baxay magaalooyin kala gedisan oo katirsan dalka Kenya, kuwaas oo muujinaya sida ay uga careysanyihiin hannaanka ay wax u socodaan. Magaalooyinka Nairoobi, Kasuma iyo Nalo ee dalka Kenya waxaa laga soo sheegayaa in dad careysan iyo Ciidamada Booliiska ay isku dheceen, inkastoo weli la sheegin khasaare Nafeed. Dadka Careysan ee taageerayaasha u ...	Read More »
Kudhowaad 7 Askari oo lagu dhaawacay Weerar ka dhacay Faransiiska.
Wararka ka imaanaya dalka Faransiiska waxaa uu ku waramayaa in halkaas uu ka dhacay weerar qorsheysan oo lagu qaaday ciidamo katirsan Booliiska wadankaas. Weerarka oo loo adeegsaday Gaari waxaa fuliyay qof aan heybtiisa illaa iyo hadda la ogeyn, waxaana uu ka dhacay degmada Lovel Berry ee wuqooyiga caasimadda Faransiiska ee Paris. Ugu yaraan 6 Askari oo katirsan ciidamada Booliiska ayaa ...	Read More »
Inkabadan 10 Ruux oo lagu dilay weerar ka dhacay Kaniisad ku taalla dalka Naijeriya.
Warbaahinta dalka Nayjeeriya ayaa xaqiijiyay in rag hubeysan ay weerar ku qaadeen Kaniisad ku taalla koonfur bari wadankaas, iyagoona halkas ku dilay tiro farabadan oo Kirishtaan ah, halka kuwa kalena ay dhaawaceen. Weerarkan oo dhacay aroornimadii maanta ayaa gallaaftay nolosha 11 Ruux, halka 18 kalena ay dhaawacmeen, waxaana kaniisaddu ay ku taalla gobolka Anaambara ee wadanka Naijeriya. Sida ay sheegayaan ...	Read More »
Gelinkii dambe ee shalay ayaa weerar culus waxaa lagu qaaday kolonyo ciidamo Ameerikaan ah oo ku safrayay gobolka Qandahaar oo dhaca koonfurta dalka Afqaanistaan, kana mid ah gobollada ay sida aadka ugu xooganyihiin Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ee Dhaalibaan. Weerarkan oo ahaa camaliyad Istish-haadi ah oo si aad ah loo soo qorsheeyey islamarkaana hadafkii laga lahaa laga gaaray ayaa ka dhacay ...	Read More »
Dalka Afqaanistaan ee muslimka ah, wararka naga soo gaaraya waxay xaqiijinayaan in ciidamo Ameerikaan ah lagu xasuuqay dalkaas, kadib markii ay weerar fashilmey kusoo qaadeen mid kamid ah deegaannada ay Mujaahidiintu ka arrimiyaan. Ciidamadan Ameerikaanka ah oo watay Helecopters ayaa saqdii dhexe ee habeen hore waxay soo weerareen deegaanka Tash-halgazi ee hoos yimaada degmada Sabiin Qur ee gobolka Nanjahaar. Ciidamada ...	Read More »
Warbaahinta iyo Shacabka Kenya ayaa aad u hadal haya, dilka mas’uul sare oo katirsna gudiga Doorashooyinka dalka Kenay oo la filayo in dhawaantan la qabto. Kariis Musando oo ahaa mas’uulka qeybta Technologiyada iyo macluumaadka ee Gudiga doorashada madaxtinimada dalka Kenya ayaa maalintii Isniinta waxaa la helay isagoo meyd ah. Waxaa la waayay 3 maalmood ka hor, iyadoona la garan waayay ...	Read More »
Tan iyo markii Donald Trump uu la wareegay madaxtinimada dalka Maraykanka, waxaa la dareemayay khilaafaad iyo iska daba hadal ay sameynayaan madaxda dowladda Maraykanka, iyadoo loo aaneynayo siyaasadda iyo qalafsanaanta madaxweynahan ay dad badi ku tilmaamaan inuu yahay mid waalan. Waxaa jira mas’uuliyiin farabadan oo lixdii bilood ee lasoo dhaafay xilalka laga casilay, halka kuwa kalena ay iyagu garteen iney ...	Read More »
War rasmi ah ayay xarakada Shabaabul Mujaahidiin kasoo saartay dagaal culus oo shalay shabeelaha Hoose ku dhexmaray Ciidamada Ugandha iyo kuwa Alshabaab. Shir jaraa’id uu qabtay Sheekh Cali dheere Afhayeenka shabaabul Mujaahidiin ayuu ku faafaahiyay dagaal ka dhacay Golweyn. “Dagaalka Halkaasi ka dhacay ee ay isku fara saareen Mujaahidiinta iyo Cadowga wuxuu noqday mid allaah uu guul ku siiyay Mujaahidiinta, ...	Read More »